Fandevenana an-tsokosoko :: Telo mianaka niara-nadoboka eny Antanimora • AoRaha
Fandevenana an-tsokosoko Telo mianaka niara-nadoboka eny Antanimora
Nalevina tao amin’ny tranony fonenany, teny Ankafy Alasora, ny vatana mangatsiakan’ny lehilahy iray, 66 taona, namoy ny ainy, andro vitsivitsy lasa izay. Ny vady aman-janany ihany no voampanga ho nandevina an-tsokosoko ny razana.
Nogadraina vonjimaika eny amin’ny fonjan’Antanimora izy telo mianaka, taorian’ny famotorana nataon’ny polisy sy ny Fampanoavana.
Nampandre ny mpitandro filaminana ny tompon’andraikitra teo anivon’ny fokontany, afak’omaly, rehefa nahafantatra fa misy lehilahy nalevina ao amina trano iray. Nahitana razana efa simba tokoa tao amin’io trano io. Nosamborina avy hatrany ny olona telo mipetraka ao: renim-pianakaviana sy ny zanany lahy, 40 taona ary ny zanany vavy, 25 taona.
“Narary vavony, hono, ilay raim-pianakaviana ka notsaboin’ny zanany lahy tamin’ny alalan’ny otra. Nindaosin’ny fahafatesana izy, taty aoriana. Tao amin’ny efitrano fatorian’ny zanany lahy no nandevenana ny razana. Filazana ny famafana ny anaran’ny maty ao amin’ny bokin’ny fokontany no nahalalana ny zava-nisy rehetra”, hoy ny mpanao famotorana.
Vono olona :: Nitifi-tena ilay zandary rehefa nahafaty ny raibeny
Arivonimamo :: Lehilahy nofonjaina noho ny fihetsika mamoafady tamina zaza